ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ
English: North Korea
39°2′N 125°45′E﻿ / ﻿39°2′N 125°45′E﻿ / ﻿39.033; 125.750
• ထာဝရ သမ္မတ
၄၆,၅၂၈ စတုရန်းမိုင် ( ၁၂၀,၅၄၀ km²) (အဆင့်: ၉၈)
၂၄,၀၅၁,၂၁၈ (အဆင့် - ၅၁)
၁၉၈.၃/km²(၅၁၃.၈/sq mi) (အဆင့် - ၅၅)
US $၄၀ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၉၄)
US $ ၁,၉၀၀ (အဆင့် - ၁၅၄)
ပြုံယမ်း စံတော်ချိန် (UTC+9)
မြောက်ကိုရီးယားဟုခေါ်သော ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် ၁၉၇၆ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီး၏ ခန့်မှန်းချက်အရ လူဦးရေမှာ ၃၄,၆၈ဝ,၆၄၄ ခန့်ဖြစ်သည်။ မြို့တော်မှာ ပြုံယမ်းမြို့ ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအကြီးအကဲမှာ ခေါင်းဆောင်ကြီး ကင်ဂျုံအွန် ဖြစ်သည်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်သင်္ဘော ပွေဗလိုသည် ကိုရီးယား ရေပိုင်နက်အတွင်း ဝင်ရောက်လာသည်ကို သိရှိသဖြင့် ကိုရီးယား တပ်မတော်က ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံတို့ စစ်ဖြစ်မည့်အခြေ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ရာက တစ်ကမ္ဘာလုံး တုန်လှုပ် ချောက်ချားခဲ့ရသည်။
၁၉၆၉ ခုနှစ်ကလည်း အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေး လေယာဉ်သည် မြောက်ကိုရီးယား လေပိုင်နက်ထဲသို့ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်သဖြင့် ပစ်ခတ်ရာမှ တစ်ကမ္ဘာလုံး တုန်လှုပ် ချောက်ချားစေသည့် အရေးအခင်း ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရက ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် လူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ် ကြားနေနိုင်ငံတစ်ခုခုမှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် စစ်မဲ့ဒေသဖြစ်သော ပန်မန်ဂျုံဒေသ၌ ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး စေ့စပ် ဆွေးနွေးရန် လွှတ်တော်သို့ အကြံပေး တင်ပြသည်။
၁၉၇၁ ခု စက်တင်ဘာလ ၂ဝ ရက်နေ့မှစ၍ နှစ်နိုင်ငံ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့များက ဦးဆောင်၍ နှစ်နိုင်ငံ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေးအတွက် စေ့စပ်ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း ၁၉ ကြိမ် တိုင်သည်အထိ မပြေလည်ခဲ့ချေ။ ၁၉၇၂ ခုနှစ် မေလမှ ဇူလိုင်လအတွင်း နှစ်နိုင်ငံ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံ၍ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး၍ နှစ်ဖက်စလုံးမှ လိုက်လျောမှုများ ပြုခဲ့ကြရာ သဘောတူညီချက် ခုနစ်ချက်ကို နှစ်နိုင်ငံ မြို့တော်များ၌ ထုတ်ပြန်သည်။
ပြည်ပ စွက်ဖက်မှုကင်းရှင်းစွာ နှစ်နိုင်ငံ ချင်းသာငြိမ်းချမ်းသောနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန်
နှစ်ဖက် လက်နက်အား အသုံးပြုခြင်း ရပ်စဲရန်
နှစ်နိုင်ငံ နားလည်မှုဖြင့် အဆက်အသွယ်များ ပြုလုပ်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းရန်
နှစ်နိုင်ငံ ကြက်ခြေနီများ ပူးပေါင်းဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်အောင် ကူညီရန်
စစ်ရေး စစ်ရာများ မမျှော်လင့်ဘဲ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကို တားနိုင်ရန် နှစ်နိုင်ငံ မြို့တော်အကြား အရေးပေါ် စကားပြောကြေးနန်း ဆက်သွယ်ရန်
ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံမှ မစ္စတာလီဟူရက်နှင့် ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ အစိုးရအဖွဲ့ လမ်းညွှန်ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာ ကင်ယန်ဂျိုးတို့ ပူးတွဲ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်သော ကော်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့ ဆောင်ရွက်ရန်
ပြည်သူအပေါင်းရှေ့၌ ကတိသစ္စာပြု၍ သစ္စာရှိ ဆောင်ရွက်ရန်တို့ ဖြစ်သည်။
ယင်းသဘောတူညီချက်အရ အကြိမ်ကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း နှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းရေးသည် ယနေ့တိုင် အောင်မြင်မှု မရသေးချေ။
↑ Minahan, James B. (2014). Ethnic Groups of North, East, and Central Asia: An Encyclopedia. Santa Barbara: ABC-CLIO, 147. ISBN 978-1-61069-018-8။
↑ (ကိုရီးယား) UNFPA (2009-10-01). "한반도 인구 7천400만명 시대 임박". United Nations. Retrieved on 2010-04-14.
↑ Decree on Redesignating Pyongyang Time (30 April 2018)။4May 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ စွယ်စုံကျမ်းနှစ်ချုပ် (၁၉၇၈)
Acèh: Korèa Utara
አማርኛ: ስሜን ኮርያ
aragonés: Coreya d'o Norte
العربية: كوريا الشمالية
مصرى: كوريا الشماليه
অসমীয়া: উত্তৰ কোৰিয়া
asturianu: Corea del Norte
azərbaycanca: Şimali Koreya
تۆرکجه: قوزئی کوره
башҡортса: Корея Халыҡ-Демократик Республикаһы
žemaitėška: Šiaurės Kuoriejė
Bikol Central: Korea nin Norte
беларуская: Паўночная Карэя
беларуская (тарашкевіца)‎: Карэйская Народна-Дэмакратычная Рэспубліка
български: Северна Корея
भोजपुरी: उत्तर कोरिया
বাংলা: উত্তর কোরিয়া
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী: ঔয়াং কোরিয়া
brezhoneg: Republik Poblel ha Demokratel Korea
bosanski: Sjeverna Koreja
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ: Korea Utara
буряад: Хойто Солонгос
català: Corea del Nord
Chavacano de Zamboanga: Corea del Norte
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
нохчийн: Корейн Халкъан-Демократин Республика
Cebuano: Amihanang Koreya
کوردی: کۆریای باکوور
qırımtatarca: Şimaliy Koreya
čeština: Severní Korea
kaszëbsczi: Kòrejańskô Lëdowò-Demokratnô Repùblika
Cymraeg: Gogledd Corea
Zazaki: Koryay Zımey
dolnoserbski: Pódpołnocna Koreja
डोटेली: उत्तर कोरिया
ދިވެހިބަސް: އުތުރު ކޮރެއާ
eʋegbe: North Korea
Ελληνικά: Βόρεια Κορέα
español: Corea del Norte
euskara: Ipar Korea
estremeñu: Corea del Norti
فارسی: کره شمالی
suomi: Korean demokraattinen kansantasavalta
français: Corée du Nord
arpetan: Corê du Nord
Gaeilge: An Chóiré Thuaidh
Gagauz: Poyraz Koreya
Gàidhlig: CoirèaaTuath
galego: Corea do Norte
Avañe'ẽ: Yvate Koréa
गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni: उत्तर कोरिया
ગુજરાતી: ઉત્તર કોરિયા
Gaelg: Yn Chorea Twoaie
Hausa: Koriya ta Arewa
客家語/Hak-kâ-ngî: Chêu-sién Mìn-chú-chú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
Hawaiʻi: Kōlea ʻĀkau
עברית: קוריאה הצפונית
हिन्दी: उत्तर कोरिया
Fiji Hindi: North Korea
hrvatski: Sjeverna Koreja
hornjoserbsce: Sewjerna Koreja
Kreyòl ayisyen: Kore dinò
հայերեն: Հյուսիսային Կորեա
interlingua: Corea del Nord
Bahasa Indonesia: Korea Utara
Iñupiak: Nigiq Korea
Ilokano: AmiananaKorea
italiano: Corea del Nord
Patois: Naat Koria
la .lojban.: berti zei .tcosyn
Jawa: Koréa Lor
ქართული: ჩრდილოეთი კორეა
Qaraqalpaqsha: Arqa Koreya
Taqbaylit: Kurya n Ugafa
Адыгэбзэ: Корей Лъэпкъ Демократ Республикэ
Kabɩyɛ: Kooree Hayɩ Kiŋ
Kongo: Hangu ya Node
Gĩkũyũ: North Korea
қазақша: Корей Халық Демократиялық Республикасы
kalaallisut: Korea Avannarleq
ಕನ್ನಡ: ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ
къарачай-малкъар: Корей Халкъ-Демократ Республика
kurdî: Korêya Bakur
коми: Корея Войтыр Демократия Республика
kernowek: Korea Gledh
Кыргызча: Корей Эл-Демократиялык Республикасы
Latina: Res publica popularis democratica Coreana
Ladino: Korea del Nord
Lëtzebuergesch: Demokratesch Volleksrepublik Korea
лезги: Кореядин Халкьдинни-Демократиядин Республика
Lingua Franca Nova: Corea Norde
Ligure: Corea do Nord
lumbaart: Corea del Nòrd
lingála: Koré ya Nola
لۊری شومالی: کوراْ شومالی
lietuvių: Šiaurės Korėja
मैथिली: उत्तर कोरिया
Malagasy: Korea Avaratra
олык марий: Йӱдвел Корей
Minangkabau: Korea Utara
македонски: Северна Кореја
മലയാളം: ഉത്തര കൊറിയ
монгол: Умард Солонгос
मराठी: उत्तर कोरिया
Bahasa Melayu: Korea Utara
Malti: Korea ta' Fuq
مازِرونی: شمالی کره
Dorerin Naoero: Ripubrikit Engame Korea
Nāhuatl: Corea Mictlampa
Napulitano: Corea d''o Nord
नेपाली: उत्तर कोरिया
नेपाल भाषा: उत्तर कोरिया
norsk nynorsk: Nord-Korea
Novial: Nord Korea
Diné bizaad: Náhookǫsjí Binááʼádaałtsʼózí Dineʼé Bikéyah Yázhí
occitan: Corèa del Nòrd
Livvinkarjala: Pohjas Korea
Oromoo: Kooriyaa Kaabaa
ଓଡ଼ିଆ: ଉତ୍ତର କୋରିଆ
Ирон: Корейы Адæмон Демократон Республикæ
ਪੰਜਾਬੀ: ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ
Kapampangan: Pangulung Korea
Papiamentu: Nort Korea
Norfuk / Pitkern: North Koriya
polski: Korea Północna
Piemontèis: Coréa dël Nòrd
پنجابی: اتلا کوریا
پښتو: شمالي کوريا
português: Coreia do Norte
Runa Simi: Chusun Runakapaq Runallaqta Republika
romani čhib: Nordutni Koreya
română: Coreea de Nord
русский: Корейская Народно-Демократическая Республика
русиньскый: Корейска Людова Демократична Република
Kinyarwanda: Koreya y’Amajyaruguru
संस्कृतम्: उत्तर कोरिया
саха тыла: Кэриэйэ Демократ Дьон Өрөспүүбүлүкэтэ
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ: ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱳᱨᱤᱭᱟ
sardu: Corea de su Norte
sicilianu: Corea dû Nord
Scots: North Korea
سنڌي: اتر ڪوريا
srpskohrvatski / српскохрватски: Sjeverna Koreja
සිංහල: උතුරු කොරියාව
Simple English: North Korea
slovenčina: Kórejská ľudovodemokratická republika
slovenščina: Severna Koreja
chiShona: North Korea
Soomaaliga: Waqooyiga Kuuriya
shqip: KorejaeVeriut
српски / srpski: Северна Кореја
SiSwati: IKhoriya leseNyakatfo
Sunda: Koréa Kalér
Kiswahili: Korea Kaskazini
ślůnski: Půłnocno Koryjo
தமிழ்: வட கொரியா
తెలుగు: ఉత్తర కొరియా
tetun: Koreia Norte
тоҷикӣ: Кореяи Шимолӣ
Türkmençe: Koreýa Halk-Demokratik Respublikasy
Tagalog: Hilagang Korea
Tok Pisin: Not Koria
Türkçe: Kuzey Kore
Xitsonga: North Korea
татарча/tatarça: Корея Халык Демократик Җөмһүрияте
chiTumbuka: North Korea
тыва дыл: Соңгу Көрей
удмурт: Корея Калык-Демократи Республика
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: شىمالىي چاۋشيەن
українська: Північна Корея
اردو: شمالی کوریا
oʻzbekcha/ўзбекча: Koreya Xalq Demokratik Respublikasi
vèneto: Corea del Nord
vepsän kel’: Korejan Rahvahaliž-Demokratine Tazovaldkund
Tiếng Việt: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Winaray: Amihanan nga Korea
Wolof: Kore gu Bëj-gànnaar
хальмг: Солоңһудин Улус Орн
isiXhosa: Coreia do Twoaie
მარგალური: ოორუე კორეა
ייִדיש: צפון קארעע
Yorùbá: Kòréà Àríwá
Vahcuengh: Cauzsenh Minzcujcujyi Yinzminz Gunghozgoz
Bân-lâm-gú: Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok